crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> September | 2019 | HimiloNetwork
Maxaa xadka laba dal looga dhisay Siisaw lagu ciyaaro?!
Himilo September 26, 2019	Leave a comment 313 Views
MEXICO (HN) — Laba barafeesar oo California jooga ayaa xadka labada dal ee Mexico-US waxay ka dhiseen siisaw – dadaal ay ku doonayaan inay ku wiiqaan qorshaha Donald Trump uu ku doonayo inuu xadka labada dal kaga dhiso gidaar dhererkiisu yahay 2,000 mile. Siisawga oo laga sameeyey xadka labada magaalo ee New Mexico iyo Ciudad Juarez, ayaa carruurta iyo dadka ...
Qolal lagu cabo Sigaarka oo laga dhex sameynayo Dhismayaasha Wasaaradaha Sucuudiga.
Himilo September 26, 2019	Leave a comment 273 Views
RIYAD (HN) — Wasaaradda Caafimaadka Sucuudiga, oo dagaal weyn ku iclaameysay sigaar cabista, ayaa qorsheynaysa inay dhisto qolal goonni ah oo lagu dhex nuugo sigaarka gudaha xarumaha waaweyn. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Wasaaraddu ay quuddareynayso dhismaha qolal saddex mitir midkiiba la’eg yahay oo kuwa caba sigaarka ay ku dhex nuugi karaan. Waxaana loo dhisayaa si ku filan ...
La kulan – Wadaadka Afadiisa shaqada guriga kala dhinac shaqeeya!
Himilo September 26, 2019	Leave a comment 383 Views
MUQDISHO (HN) — Badi dadka miyiga ku nool, waa dhif inaad aragto nin jikada ku jira oo cunto karinaya ama afadiisa ka caawinaya howlaha guriga. Tani waxa loo celinayaa aragtida ah in haweenka iyo ragu kala madax-bannaan yihiin dhanka shaqada oo aysan wada shaqeyn karin. Laakiin waqtigu wuu is beddelayaa hadda. 64 jirka la yiraahdo Mba Osman Bawa wuxuu ku ...
Himilo September 24, 2019	Leave a comment 845 Views
MUQDISHO (HN) — Waaya’aragnimadayda Xajka waa qiso aniga igu saabsan. Laakiin dhammaadkeedu waxay ku saabsan tahay adiga! Mid kamid ah duullimaadyadii iigu weynaa iyo safarkaygii koowaad oo aan ku aado dibadda, waxaa Eebbe i waafajiyay inuu noqdo midkii aan ku tagi lahaa Gurigiisa – anigoo Xaaji ah. Dhowr jeer oo flight-kii aan ku qornaa uu iga baaqday kaddib, waxaa ugu ...
Maxaa nin-aan-Muslim aheyn ku qaaday inuu kobaha si fiican ugu dhigo Muslimiinta Majisda al-Mawaddah?!
Himilo September 23, 2019	Leave a comment 300 Views
MUQDISHO (HN) — Nin aan Muslim ahayn oo la yiraahdo Uncle Steven ayaa afaafka hore ee Masjidka al-Mawaddah waxaa la arkaa isaga oo isku hagaajinaya kobaha ay bannaanka uga tagaan Muslimiin xilliyada ay ku jiraan salaadaha. Qof kasoo duubay muuqaal ku baahay baraha bulshada ayaa sheegay in ninkani uu sidaan sameeyo toddobaad kasta marka ay Muslimiintu ku jiraan Masjidka. Wuxuu ...
Eygii 4 sanno taagnaa isla goobtii ay ku kala lumeen saaxiibkiisa!
Himilo September 23, 2019	Leave a comment 273 Views
MUQDISHO (HN) — Kaddib afar sanno oo ay kala dhumeen qofkii lahaa, ey baadi ah oo ku nool Thailand ayaa dib ula midoobaya saaxiibkiisa. Sheekada Eygan la yiraahdo Leo oo goob is-goys ah muddo 4 sano ah ku sugi jiray saaxiibkii lahaa ayaa ku baahday baraha bulshada kaddib adeegsade facebook uu ka qaaday sawiro dhowr ah. Qoraal la socday sawirada ...
Himilo September 23, 2019	Leave a comment 219 Views
MUQDISHO (HN) — Booliska ayaa ku daba jira baadi-goobka nin la sheegay inuu furay xaaskiisa ogaal la’aanteeda. Mana dhicin inuu marna la socodsiiyo inuu furayo. Paul Nixon, oo 51 jir ah, wuxuu si xeeladeysan usoo xaday saxiixa xaaskiisa isaga oo kusoo dhigay warqadda codsiga kala-taga lammaanaha. Wuxuuna Maxkamadda ka dhaadhiciyay inay heshiis ku yihiin inay kala tagaan. Maadama laba saxiix ...
32 jir – si uu ugu dhoofo Maraykanka – iska dhigay 86 jir!
Himilo September 23, 2019	Leave a comment 283 Views
MUQDISHO (HN) — Marka aad muuqaalka sare ka eegto wuxuu kuula muuqda sida qof waayeel ah. Waana xeeladdan midii uu ku qalday waaxda amniga garoonka. Wuxuu iska dhigay 81 jir isaga oo da’diisa dhabta ah ay tahay 32. Jayesh Patel waxaa lagu xiray gegida Indira Ghandi isaga oo duulimaad u ah Maraykanka. Wuxuuna iska dhigay waayeel 86 jir ah. Wuxuu ...
Burkiyeerkii ugu horreeyey oo Islaami ah oo laga furay Tokyo.
Himilo September 19, 2019	Leave a comment 330 Views
TOKYO (HN) — Xarun burkiyeer cusub oo Islaami ah tii ugu horreysay ayaa lagu furay caasimadda Tokyo taas bixin doonta adeeg ku saleysan Shareecada oo loogu adeegi doono gabdhaha Muslimaadka ah ee doonaya inay helaan meel ay isku qurxiyaan, sida laga soo xigtay The Asahi Shimbuni. “Adeegani waa mid fariid ah, wuxuuna ku siinaya dareenka bogsasho ah,” Dhyah, oo 24 ...
Muslim $2,000 dib ugu celiyay qofkii lahaa oo diiday in la abaal-mariyo.
Himilo September 19, 2019	Leave a comment 220 Views
ROMA (HN) — Da’yar u dhashay dalka Bangladesh oo dukaan dharka lagu iibiyo ku leh magaalada Roma ayaa lagu bogaadiyay daacadnimadiisa kaddib markii uu dib u celiyay lacag $2,000 – iskana diiday inuu qaato lacag baadi-fur ahaan lagu abaal-marin rabay, sida laga soo xigtay IimFeed. Mossan Rasal wuxuu usii jeeday shaqadiisa markii uu jidka ka helay boorso lacag ay ku ...
Caruus iyo caruusad Xabsiga loo taxaabay habeenkii koobaad ee Bisha Malabka.
Islaamka iyo Ruushka – Iftiimin.
Sheekada Qoyskii – 30 sanno kaddib – dib ula midoobay Wiilkooda.
Wuxuu igu qasbay inuu walaalkiis ii galmoodo!!